Isixazululo Sokupakisha - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Solutions Sokupakisha"
Isilo esiguquguqukayo - indawo ephezulu yokuphuma
Ama-silos aklanyelwe ukugcina imikhiqizo ngendlela yokugcwala okugcwele.
Le yunithi inokuphakama kwephalethi kanye nomthamo wesitoreji we-1.2 m³.
Ishicilelwe ku AmaSilo
I-silo eguquguqukayo - indawo yokuphuma
Le yunithi inokuphakama kwepallet okugcwele nomthamo wesitoreji ongu-2.5 m³.
NgoMgqibelo, 06 Agasti 2016 by UDanny De Bruyn
Embonini yokubumba ngokushaya kukhona izinhlobo ezahlukene ze-pallet ezisetshenzisiwe, kuya ngohlelo lokusebenza.
Le ndatshana icacisa izinhlobo ezahlukene futhi inikeze umbono osheshayo.
Ishicilelwe ku Ukuxazulula Izixazululo
Iyunithi yokulawulwa kwesilo esiguquguqukayo
Iyalayisha esiteshini esiguquguqukayo
Iyalayisha isiteshi se-silo eguqukayo ngenketho yokupholisa.
Isilayisha isiteshi sesilo esiguquguqukayo